GarsoorNews - Farmaajo Ujeedo Nuucee ah ayuu ka lee yahay Xariga A.A.Warsame
by Farah C/laahi | Wednesday, Dec 20, 2017 | 68 views
Maxey noqon karta ujeedada Farayaamo uu ka leeyahay xariga Siyaasiga Md Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame.
Ma waxey tahay in culeyska mooshinka xildhibaanada laga leexiyo oo hadba loo abuuro dhacdooyin siyaasadeed oo ay ku mashquulan? Mise kooxda Qiyaano Qaran ayaa is mucaaradsan oo doonaya ineysan kala harin oo ay wada dumaan?Mise waa xeelad la doonayo in la isku xajiimeeyo beelaha dega Muqdisho oo la soo kala dhoweysanayo? Mise qas iyo qalalaase ah in lagu carqaladeeyo wanaag inuusan dhicin dabadood, taas oo ka turjumeysa hadal murtiyeedkii Soomalida oo ahayd: Cad Yahow Ama Ku Cunay Ama Ku Ciideyey?Mise Farayaamo wuxuu uga goleeyahay isbaheysi beeleed oo uu la mataanoobo ayuu u baaqayaa?
Falaaraha Farayaamo cirka u tuurayo ma uu fahamsana cida ugu dambeysta ay ku weecan doonto. Inkasto dadka warbaahinta ay dowladu horkeentay si ay u taageeraan kiiska lagu waxyeeleeyey C/Rahman C/Shakuur ay u badnaayeen heybta beelweynta degta Muqdisho, haddana kama maqna shaqsiyaadkaas dareenka guracan ee Farayaamo ka damacsan yahay warmaha uu ku tuurayo walaalahooda.
Inkasto ismuujinta iyo si qaldan u xifaaltanka Kheyre uusan ku xagsan karin xukunka, haddana waa lagama maarmaan inuusan hureyn dadkiisa iyo maslaxada guud ee degaankiisa. Horay ayaa loogu guuldareystay mataameynta dowladda iyo dadka degaanka oo danta laga leeyahay ay tahay qeybi si xukunkaagu u sii jiro.
Ujeedada ugu weyn oo xukuumaddu ay u sameyneyso ismiidaaminta waa Farayaamo inuu sanadka cusub ka badbaado halista xilka looga tuurayo, taas oo kaliftay in indhaha Baarlamaanka lagu sii jeediyo xukuumada oo dhicid ma hurto ah si carada iyo ciilka xildhibaanada ay kala duldhacaan ridida xukuumadda sidaasna uu ku badbaado Farayaamo.
Taas waxaa ka turjumaya daandaansiga lagu bilaabay Xildhibaanada iyo sida indhahooda loogu jeediyey xukuumadda iyo sida dadka aragtidooda siyaasadeed ay gaaban tahay loogu jeediyey xiriirka ka dhexeeya beesha caalamka iyo mucaaradka ama Baarlamaanka.
Waxaa aad u xumaaday xiriirka xukuumada iyo beesha caalamka, waxaana wanaagsanaadey xiriirka maamul-goboleedyada iyo beesha caalamka, taas oo gablan ka dhigtay madaxda dowladda dhexe iyo dhaqaalexumo soo foodsaartey.
Shishheyuhu hantidooda iyagaa u madaxbanaan oo marka ay siiyaan madaxda dowladda ma noqoneyso wadaniyad, marka mucaaradka la siiyana qiyaano.
Addunka oo dhan danaha siyaasadeed ee fikirka ku dhisan waa la isku taakuleeya oo la isku kaashadaa, mana ahan wax dembiya.
Wadan walba wuxuu leeyahay xeerar jideeya taakuleynta dhaqaale ay siyaasiyiintu ay ka helaan dibeda iyo shirkadaha ganacsiga ama lacag yaboohsi(fundraising), waxaana jira hayado ku shaqo leh la socodkooda oo ka soo horjeeda lacagaha aan xalaasha ahayn oo dhaqan dambiyeedka iyo maandooriyaha ka yimaada.
Farayaamo wax kasta waa sameynayaa si uu u soo jiito indhaha iyo maqalka ka sii jeeda ee xildhibaanada iyo bulshada caalamka. Wuxuu horay ugu fashilmay inuu iska horkeeno maamul-goboleedyada iyo bulshada caalamka, wuxuuna hadda wadaa naflacaarinimadii u dambeysey oo uu ku doonayo xildhibaanada inuu fowdo ka dhex abuuro si qorshihiisa cimri dheereysiga ah uu u hirgalo.
Waxaa hubaala inaan la huri doonin Farayaamo xilkasnimo xumadiisa in xal loo helo sanadka cusub inkasto uu dabka ku tuurayo xukuumada si xilkiisa looga haro.
Prof: Saciid Ciise Maxamuud
4ta Calooshood u shaqeyste ee ku Nool Xamar
Ciidanka Dowladda Soomaaliya 30% Ma Hubeysna